Weellisaa duraanii Tafarraa Nagaash maaliif taaksii oofuu akka filate dubbata - BBC News Afaan Oromoo
Weellisaa duraanii Tafarraa Nagaash maaliif taaksii oofuu akka filate dubbata
Madda suuraa, Fuula Feesbuukii Tafarraa Nagaash
Albeemoota sirbaa shan baase jira. Weellistoota akka Araggaahany Wooraashiifi kn waliin hojiilee artii hedduu hojjate jira. "Minnawuu Qazqaza fiqiraachiin" hojiiwwan isaa keessaa kan beekamuudha. Tibba kana konkolaachiisaa taaksii ta'uu isaa irraa kan ka'e namoonni hedduu haasa'aa jiru.
Sirba dhiifte eega faaruu jalqabade hammam turte?
Tafarraa: Amma waggaa 13 xummuree 14ffaa ta'aa jira.
Yeroo murtoo kana murteessitu dinqisifattoonnikee maal jedhu turan?
Tafarraa: Yaada garaagaraatu ture. Kan murtookoo deggaraniis turan. Tokko tokko ammoo akkan weellisummaakoo itti fufuu barbaadu. Muraasni isaanii ammoo kan kana falman jiru. Ta'uus murtoon kan dhuunfaakoofi jireenya mataakoo waan ta'eefi jireenyii wangeelaa kan ati itti of argitudha. Kan sitti dhagahameefi sitti mul'aate jiraatta.
'Dhabuu keessa teessee waa'ee argachuu yaadda'
Erga jireenya hafuraa jirachuu jalqabdee yeroo weelluwwan kee dhageessu maaltu sitti dhagahama?
Tafarraa: Dhugaa dhubbachuudhaaf murtookeetu murteessa. Gaafan kana murteessu waa hubadhee waan ta'eef itti hin gaabbu. Wanti hubadhe sunis sammuukootii ol waan ta'eef homaanu wal dorgomsiisuu hin barbaadu.
Kanaafuu, muuziqaafi sirbichis eessa akka deeman hin beeku. Feedhiinkoos du'eera. Amma yeroo hojiiwwankoo kan duraa yeroon dhagahu waamtuu natti hin dhagahamu.
Yeroo sagaleefi muuziqaa sana dhageessu akka nama biraatti dhageessa jechuudhaa?
Tafarraa: Dhugaadha. Fakkenyaaf, osoo Macaafaa Qulqulluu ilaaltee, eenyuu Kiristoos waliin yoo ta'u nama haaraadha. Uumamaa haaraa kan jedhu dhugaadha. Yoo gara eenyummaakoo isaa haaraatti dhufu keessikoo jijiiraamee jira. Jijiiraamni sun sirba qofa miti waantoota biroos kan cubbuu waliin wal qabaatan hunda eessa akka deeman hin beeku.
Bilisa ta'e, feedhiin koo jijiirame, nama biraa ta'e of argee. Fakkenyaaf waan tokko sitti haa himu ;Jimaa hin qamaa'uu, dhuddoo hin dhuguu. Gafaan murte kana murteessu guyyaa itti aanu sa'aatii 9tti. Keessa koo yoon dhagahu keessi koo hin jiru. Akkumma kana sirbi koos waliin bade jira.
Hojiiwwaan kee miidiyaaleen garaagaraa yeroo banan sitti dhagahamaa?
Tafarraa: Akkasitti hin yaadu. Mormiis hin qabu. Sababni isaas hojiiwwaan sun kan qoofakoo miti. Kan baandii muuziqaa, kan walaloo barreesseefi kan yeedalloo barreesseti. Kan qofaakoo hojjadhe waan hin taaneef namoonni biroos mirga qabu.
Waan darbeef itti hin gaafatamu. Yeroos sirrii ture. Amma ammoo sana caalaa sirridha. Gara duubaatti deebi'ee sun maaliif ta'e hin jedhu. Maaliifan sirbe jedhee hin gaddu. Karaa biraan ammoo namoonni ijoo dubbii isaanii akka godhataniifi isaaniis murtoo jireenya isaanii akka murteessaniif isaan gargaara.
Maaliif 'RIDE'waliin hojjachuu barbaadde? Akkamitti gara hojii kanaa dhufuu dandeesse?
Tafarraa: Kanaan duras hojiiwwaan biroo nan hojjadha ture. Amma RIDE dhufnaan lakkoofsa gabate konkoolaataakoo gara lakkoofsa 3'tti jijiire. Hayyama daldalaa baasee, dhaabbatticha waliin waliigallee hojjachuu jalqabe. Hojichi bareedaadha. Baay'ee natti tolee jira.
Murtoo kana kan murteesse ammoo gaafa hojii tokko hojjachuuf yaaddu dursa sammuunkee boqonnaa argata. Kan biroo ammoo karaa namoota biroo ittiin deeggartuu argatta. Mootummaafis gibira kaffalta. Gaafan hojii kana argadhu hojiicha jalqabuudhaaf hin turre. Dafeen jalqabe.
Maamiltoonni kee hoo? Si ta'uu beeknaan maal jedhu?
Tafarraa: Hanga ammatti deebii gaarii qabu. Tokko tokko ammoo warroonni na diinqisiifatan ni nahu. Namoonni baay'een murtoo koo ni jaallatu. Ni kabajuus. Sababni isaas kun fooyyee akka qabu beeku waan ta'eef.
Akkamitti beeksiisa yoo jette fuula namootaa irra nageenya isaani ni argita. Kutannoon ani amma qabu umurii koo waliin hin deemu. Amma umuriin koo 56 garuu ga'eessa umurii 40 fakkaadha.
Namoonni tokko tokko "dargaggeessa taate, sirraa bareedee jira" naan jedhu. Nageenyi keessakoo jiru fuulakoo irra ni mul'ata. Amala namootaan waliin galu Waaqa naa kennef nan galateeffadha.
Taaksii keetiin fayyadamuu isaaniittin warroonni gammadan yookiin gaddan jiruu?
Tafarraa: Akka gammadan kanneen natti himan jiru. Tokko tokko immoo bilbila koo fudhatani akka maatiitti kan wal gaafanu jiru. Eega eegale ji'a sadiifi torban lama yoo ta'u yeroo gabaabaa kana keessatti namoota hedduu waliin wal argee jira. Namoota hojii garaagaraa hojjatan, ogummaa garagaraa qaban, beekumsa garagaraa qaban waliin wal bareen jira.
Dalagaakee haaraa jaalattee?
Tafarraa: Jaaladheen jira. Atakaaroo hin qabu. Dadhabbii hin qabu. Hojjichi bakka ati jirtutti dhufa. Namoonnis namoota gariidha.
Hojiiwwaan adda addaa akka hojjattee beektu natti himtee jirta. Mee maal faadha?
Tafarraa: Hojii koomishiini yaaleen jira. Mana ijaaree gurgurruus yaaleen jira.
Komishinii yoo jettu hojii dallaalummaa jechuu keetii?
Tafarraa: Eeyyee. Garuu, yeroo gabaabaadha. Lafa qaba waan tureef. Ta'us mi'aa ta'uu meeshaalee ijaarsaafaatu jira. Ammas mana tokko jalqabee dhaabatee jira. Hojii sana keessas seenuu yaadan qaba. Kan biraa ammoo tajaajila irran jira. Faarfannaatiinis nan tajaajilaa.
Namoonni tokko tokko gara konkolaachiisummaa taaksii hiyyoome dhufe jedhu. Maal jetta?
Tafarraa: Dubbii kana hin deeggaru. Hojii kana waa tokko dhabe miti kanan hojjadhu. Mana amantaa wangeela keessatti nan tajaajila. Sun jireenya koof hin hanqatu. Achi irratti manan kireessuu nan qaba. Dhimmichi dhimma hiyyeessa ta'uu osoo hin taane dhimma yeroo qabaatanii hojiechuudha.
Ani mana amantaatti galgala galgalaan tajajiila. Guyyaa guyyaa ammoo hojiin ala dabarsuu mannaa hojiidhaan dabarsuu wayya. Ji'atti qarshii 30,000 namoonni argatan hedduu miti.
Hojii kana irra guyyaatti qarshii kumaa ol nan argadha. Galiin isaa kan bayyee gadi aanadha jedhamu miti. Kanaafuu, wanti guddaan faayyaa qabaattee hojjattee jirachuu danda'uu keeti.
Waan kana akkan hojjadhu kan na godhe gadi jechuuf ol jechuu miti. Galata Waaqaa jireenya ol aanaa keessa jira.
Gara muuziqaatti haalli itti deebitu jira?
Tafarraa: Ergamaa Phawaloos beektaa?........Pheexiroosiin fa'a beektaa…….isaan hin deebine. Maaliif akka hin deebine beektaa?.....Waanni argaan waan foonii miti, waan Waaqaati malee.
Osoo waraanni dhufee gara duubaatti hin deebi'u. Gara duubaatti deebi'uu mannaa du'uu naaf wayya.
Weellisaa Jaamboo Jootee: 'Bara Beelbaatti aalbeema haaraa Beelbaa' jedhuun dhufaa jira